Ciidamada DF oo dagaal culus kula wareegtay Bacaadweyn | Xaysimo
Home War Ciidamada DF oo dagaal culus kula wareegtay Bacaadweyn
Ciidamada DF oo dagaal culus kula wareegtay Bacaadweyn
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaas laga saaray maleeshiyadii ka tirsaneyd kooxda Al-Shabaab ee saaka aroortii hore soo weerartay gudaha magaalada iyo taliska qeybta 21-aad ee ciidamada xoogga.
Saacado kadib waxaa magaalada iyo banaankeeda ka qarxay dagaal culus oo u dhaxeeyey dadka deegaanka Bacaadweyne, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo isku dhinac ah iyo maleeshiyadii ka tirsaneyd Al-Shabaab taasoo keentay in ugu dambeyn laga adkaado Shabaabkii weerarka soo qaaday.
Sida ay dadka deegaanku ay xaqiijiyeen, dagaalkii labaad ee ka qarxay magaalada ayaa waxaa lagu dilay ku dhawaad 25 ka tirsan Al-Shabaab-kii weerarka soo qaaday, waxaana dadka deegaanka u suurtagashay inay dib usoo celshaan laba kamid ah gawaaridii ay Maleeshiyada Al-Shabaab weerarkii koowaad ku qabsatay.
Sidoo kale, dad goobjoogayaal ah ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in gacanta lagu dhigay 4 ka mid ah maleeshiyadii ka tirsaneyd Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday oo 3 kamid ah ay yihiin dhaawac aad u daran.
Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa weerarka ay aroortii hore soo qaaday ku dishay illaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugnaa gudaha saldhigga 21-aad, waxayna dadka deegaanka xaqiijiyeen in 4 kamid ah 6-da askari ee la dilay la gowracay.
Weerarkaan ayaa wuxuu kusoo aadayo xilli Gobollada Mudug iyo Galmudug uu todobaadyadii lasoo dhaafay ka socday dhaq-dhaqaaqyo Ciidan oo ay kala sameynayeen Ciidamada DFS gaar ahaan qaybta 21-aad, askarta Galmudug & Al-Shabaab.